हेल्थ एजेन्डा « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
जनस्वास्थ्य सरकार, काठमाडौँ । विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरस महामारीले भयावह परिस्थिति सिर्जना गरेको हुँदा अस्पतालमा आएका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचारको अग्रमोर्चामा रहेका चिकित्सकहरूको मनमा शुरूमा डर थियो। क्रमश: उनीहरूले सिक्दै गए,
‘सबै निजी अस्पताललाई एउटै बास्केटमा राख्ने प्रचलन राम्रो होइन’
यतिखेर कोभिड—१९ का बिरामीहरुले राजधानीलगायतका मुलुकका अधिकांश अस्पतालहरु खचाखच छन् । मुलुकमा कोभिड उपचारको विषयलाई लिएर सरकार र निजी अस्पतालहरुबीच जुहारी पनि चलिरहेको छ । चीनको बुहानमा माघ २०७६ ताका
कोभिड संक्रमित चिकित्सकलाई प्राथमिकताका साथ बेड आइसियु र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने सहमति
जनस्वास्थ्य सरोकार । कोभिड १९ बाट संक्रमित भएका चिकित्सकहरुलाई उपचारका लागि बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। एशोशिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युसन नेपाल अफिन र
डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाप्रति राज्यको ध्यान पुगोस्
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण संक्रमण हुने रोग कोभिड—१९ ले अहिले संसारलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । गत जनवरीमा चीनमा पहिलोपटक देखिएको यो भाइरस छोटो अवधिमा नै विश्वका प्रायजसो सबै राष्ट्रमा
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । झण्डै अढाई दशकदेखि नर्सिङ पेशामा संलग्न वरुणा पौडेल हाल काठमाडौंको धुम्बाराहिस्थित ह्याम्स हस्पिटलको नर्सिङ निर्देशक हुनुहुन्छ । बीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा नर्सिङ स्टाफबाट करियर शुरु गरेपछि विभिन्न
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने नर्सहरुमा कोभिड—१९ संक्रमण बढिरहेको छ । नेपालमा कोभिड—१९ संक्रमित पुष्टि भएका नर्सहरुको संख्या ४ पुगेको छ । आइतबार धनकुटास्थित जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत
कोरोना कहरः नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्षले उठाइन् नर्सहरुको सुरक्षा र सुविधाको सवाल
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो वर्षलाई नर्सिङ तथा मिडवाइफको वर्ष घोषणा गरेको छ । कोभिड १९ कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नर्स तथा मिडवाइफको भूमिका अन्यन्त
नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्व अध्यक्ष विष्णु राईको सिकिस्त अवस्थामा वीर अस्पतालको आईसियू कक्षमा उपचार
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नर्स विष्णु राईको वीर अस्पतालको आईसियू (सघन उपचार कक्ष) मा उपचार भइरहेको छ । यसअघि उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार
आज विश्वभर नै कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) ले आक्रान्त बनाएको छ । विश्वका शक्तिशाली एवं सम्पन्न राष्ट्रहरु नै कोरोनासँग लडिरहेका छन् । औषधि पत्ता लगाउनको लागि देशका सम्पूर्ण शक्तिहरु एवं खर्चहरु
‘बडी सेमिङले’ बढ्दो नैराश्यता
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सात वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारका लागि कतार पुगेका तनहुँ देवघाटका कृष्णबहादुर पन्त दुर्घटनामा परेर ह्वीलचियरमा नेपाल फर्किए । उनको तौल एकाएक बढ्यो । सुरुमा त हिँडडुल
अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन गर्ने ठाउँ र भण्डारणको अभावले औषधिको गुणस्तर र बिरामीको सुविधामा ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं ।हस्पिटल फार्मेसी सञ्चालन गर्दा बिरामीको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । हस्पिटल फर्मासिस्ट एसोसिएसन अफ नेपाल (हस्पान) ले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘हस्पिटल फार्मेसीका
डेढ वर्षअघिको कुरा हो । पहाड चढ्न गएको बेला पेटको कुनै भागबाट रगत लिकेज (रिसाब) भइरहेको अनुभव भयो । अस्पतालमा जाँच गर्दा हेमोग्लोबिनको मात्र ७ मा झरेको देखियो । डायग्नोसिसमा
फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने औषधि व्यवसायीहरु कोरोना विरुद्ध खोपको प्राथमिकतामा परेनन्
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । यतिखेर प्रत्यक्ष बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउन फ्रन्टलाइनमा खटिने औषधि व्यवसायीहरु कोभिड—१९ विरुद्धको निःशुल्क खोप लगाउनबाट बञ्चित भएका छन् । राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको नेपाल औषधि व्यवसायी संघ
प्याथोलोजी सेवाको विस्तार खै ?
काठमाडौंको नेशनल रिफरेन्स ल्याबोरेटोरीमा कार्यरत डा. सुजन शर्माले सन् २०१२ देखि नेपालमा काम गर्नु शुरु भएको हो । उहाँले भारतको कर्नाटकस्थित कस्तुरबा मेडिकल कलेजबाट एमडी गर्नुभएको छ । सुरुमा काठमाडौं
सुपर स्पेसलाइज चिकित्सा क्षेत्रको विकास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा रेफरल सिस्टम अति आवश्यक हुन्छ । तर हाम्रो देशमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको दृष्टिकोणले हुनुपर्ने व्यवस्थित रेफरल सिस्टम भएको पाइँदैन । प्राइमरी हेल्थ
भिडियो परामर्शबाट जीवन बचाउनेहरु
चिकित्सक वा प्रशिक्षित सुँडेनीहरु हुने हो भने सुत्केरी अवस्थामा हुने मातृ मृत्यु ९९ प्रतिशतसम्म रोक्न सक्ने ठानिन्छ। पाकिस्तानमा गर्भावस्था वा सुत्केरीहुँदा उत्पन्न हुने जटिलताका कारण हरेक २० मिनेटमा एकजना महिलाको